Tebintii tooska ahayd ee doorashada madaxweynaha - BBC Somali
Tebintii tooska ahayd ee doorashada madaxweynaha
8 Feb 2017 00:008 Feb 2017 00:00
Maxamed cabdullaahi Farmaajo ayaa loo doortay madaxweyne
Wareegii labaad ayaa waxaa guul darro qirtay madaxweynihii hore xassan Sheekh
madaxweynaha cusub ayaa la dhaariyay
Xasan Sheekh ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha cusub
Ammanka caasimadda ayaa aad loo adkeeyay iyadoo la joojiyay duulimaadyada
Waddooyin badan ayaa la xiray
Posted at 19:06 8 Feb
Islii ayaa ka mid ah goobaha laga soo dhaweeyay guusha Farmaajo
Posted at 17:30 8 Feb
Madaxweynaha cusub oo wacad ku maray inuu la dagaalami doona Musuqa
Markii uu jeedinayay khudbadii uu kuu aqbalay natiijada doorashada ayaa madaxweynaha cusub Maxamed cabdullaahi Farmaajo wuxuu wacad ku amray inuu la dagaalami doono musuqmasuqa.
Waxaa iska soo daba dhacaysa hambalyada madaxweynaha cusub
Danjiraha Soomaaliya ee Qaramada Midoobay Yusuf Garraad ayaa codkiisa ku biirayay hambalyada madaxweynaha cusub.
Posted at 16:43 8 Feb
Sheekh Shariif oo hambalyeeyay madaxweynaha cusub
Sheekh Shariif oo ka mid ahaa musharrixiinta madaxtinnimada Soomalaiya ayaaa u hambalyeeyay madaxweynaha cusub Farmaajo una mahadceliyay madaxweynihii hore xasan Sheekh
Posted at 16:34 8 Feb
Xilka la ii doortay waa billawga la dagaalanka musuqmaasuqa
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa jeedinaya khudbadda, wuxuuna yiri Xilka la ii doortay waa billawga la dagaalanka musuqmaasuqa
Posted at 16:32 8 Feb
Farmaajo ayaa loo dhaariyay xillka madaxweynaha Soomaaliya
Farmaajo ayaa loo dhaariyay xilka madaxweynenimo. Wuxuu guusha qaatay ka dib amrkii madaxweynihii hore xasan Sheekh uu tanaasulay inuu kula tartamo wareega seddaxaad.
Posted at 16:29 8 Feb
War deg deg ahFarmaajo oo noqday madaxweynaha Soomaaliya
Maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa nqoday madaxweynaha Soomaaliya ka dib markii xasan Shekh uu ka taansulay wareega seddxaad oo ay labadooda ku tartami lahaayeen.
Madaxweynaha Soomaaliya ee la doortay
Posted at 16:19 8 Feb
Tirinta codadka wareegii labaad ayaa dhamaaday
Tirinta codadka ee wareegga 2aad ayaa hadda dhamaatay. Waxaa la sugayaa in natiijada lagu dhawaaqo
Posted at 16:14 8 Feb
Xildhibaanada oo sacabeeyay
Sacab xoog leh ayaa is qabsaday gudaha hoolka, rasaas dabaal deg ahna gudaha magaalada ayaa laga maqlayaa. Weli lama xaqiijin laakin mid ka mid ah murashaxiinta wareegga labaad ayaa tirinta codadka aad ugu horreeya. sida uu ku soo waramayo weriyaha BBC, Faarax Lamaane oo ku sugan hoolka uu shirku ka dhacayo
Posted at 16:12 8 Feb
Farmaajo oo aad uga horeeya murashaxiinta kale
Maxamaed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aad uga horeeya murashaxiinta kale ee la tartamaysa, marka la fiiriyo codadka ilaa iyo hadda la dhiibtay, balse wuxuu u baahan yahay saddex meeloodaw labo si uu xilka u qabto
Posted at 15:54 8 Feb
Tirinta codadka wareega labaad oo gabgabo ku dhaw
Tirinta codadka ee sanduuqa 1aad ayaa dhamaatay. Waxaa hadda socota tirinta codadka sanduuqa labaad ee wareegga 2aad.
Tirinta codadka wareega labaad oo billaabatay
Tirinta codadka wareegga labaad ayaa socota,
Posted at 15:02 8 Feb
Wareega labaad wuu ka xiisa badan yahay kii hore
Weriyaha BBC-da Ibraahim Maxamed Aadan oo ku sugan hoolka codeynta ayaa ku soo waramaya in wareegan uu ka xiisa badan yahay wareegii koobaad. Maxaa yeelay buu yiri wareegan waxaa ku soo haray seddax musharrax halka wareegii hore ay 21 musharrax u tartameysay.
Posted at 14:53 8 Feb
Xildhibaan loo diiday in uu lacag badan la galo hoolka doorashada
Tilifoonada gacanta iyo lacagaha ayaa laga maamnuucay in lala gala hoolka ay codbixinta ka socoto.
Weriyaha BBC-da Faarax Lamaane ayaa sheegay inuu arkay xildhibaan loo diiday inuu hoolka la galo $10,000 oo uu watay.
Posted at 14:45 8 Feb
Sidee wareega labaad u dhacayaa?
Musharixii helaa seddax meelood laba meel ayaa noqonaya madaxweyne, hadii kale waxaa loo gudbi doonaa wareega seddxaad oo ah kan ugu dambeeya.
Posted at 14:41 8 Feb
Codeynta wareega labaad oo si habsami leh u socota
Codeynta wareega labaad ayaa socota iyadoo xildhibaanada mid mid loogu yeerayo si ay codkooda u dhiibtaan. Waxaa ku tartamaya Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed cabdullahi Farmaajo.
Posted at 14:19 8 Feb
Toos u daawo barnaamijka Dunida iyo maanta
Barnaamijka Dunida iyo maanta oo gebi ahaantiisba ku saabsan doorashada halkan ka daawo.
Waxaa si wadajir ah u soo jeedianaya Faarax lamaane oo Muqdisho jooga iyoAadan Saalamiin oo Lonodn jooga
Posted at 14:16 8 Feb
War deg deg ahSharmarke oo haray
Mid ka mid ah musharrixiinta ku soo baxay wareega labaad Cumar Cabdirashiid Sharmarke ayaa sheegay inuu tanaasulay oouu ka haray tartanka.
Posted at 14:10 8 Feb
Wareega labaad ee doorashada oo billowday
Wareega labaad ee doorashada ayaa billowday waxaana ku tartamaya msuahrixiinta kala ah
Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke - 37 cod
Halkan ka daawo Ibraahim Aden oo sharaxaya wareegyada doorashada
Posted at 13:29 8 Feb
Musharrixiinta u gudbay wareega labaad
Waxaa wareega labaad u gudbay sida uu shaaciyay guddoomiyaha baarlamaanka
Cumar Cabdiriashiid Sharmarke
Posted at 12:29 8 Feb
Tirinta codadka ayaa socota
Waxaa socota tirinta codadkii lagu dhiibtay wareega koobaad. Haddii la waayo murashax hela 2/3 codadka oo ah 219 cod, waxaa loo gudbayaa wareegga labaad, waxaana u gudbaya afarta murashax ee ugu codka badan.
Posted at 11:57 8 Feb
Wareegii koobaad ee codaynta oo dhamaaday
Waxaa la soo gabogabeeyay wareegii koobaad ee codaynta, waxaana billaaban doonta tirinta codadkii la dhiibtay.
Posted at 11:25 8 Feb
Musharixiinta oo sugaya natiijada wareega koobaad
21 musharrixiin ayaa soo hartay ka dib markii seddax musharrax ay tanaasuleen.
Qaar ka mid ah msuahrrixiinta oo fadhiyo safka hore
Posted at 11:11 8 Feb
Halkan ayaad si toos ah uga dawan kartaa codeynta xildhibaanada
Halkan ayaad si toos ah uga daawan kartaa wareega koobaad codeynta xildhibaanada oo wali socota
Talow ma lagu kala bixi doonaa wareega koobaad?
Weriyaha BBC-da Faaarax lamaane oo ku sugan goobta codeynta wuxuu leehay haddii la waayo murashax hela 2/3 codadka oo ah 219 cod, waxaa loo gudbayaa wareegga labaad, waxaana u gudbaya afarta murashax ee ugu codka badan.
Posted at 10:54 8 Feb
Codeynta wareega koobaad ayaa socota
Weli codbixinta wareegga 1aad ayaa socota. 328 xildhibaan oo labada gole ka tirsan ayaa hoolka ku sugan oo codaynaya.
Posted at 10:28 8 Feb
Jawaari oo noqday qofkii u horeeyay ee codeeya
Gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa noqday qofkii u horeeyay ee codka dhiibtay
Posted at 10:26 8 Feb
Codaynta oo billaabanaysa
Gudoomiyaha gudiga doorashada Cabdiraxmaan Bayle ayaa sheegay in ay billaabayaan codaynta
328 xildhibaan ayaa xaadir ku ah hoolka codeynta
Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in 328 xildhibaan ay joogana hoolka oo uu hal xidhibaan oo xanuusan uu maqan yahay.
Posted at 10:19 8 Feb
Faroole oo xildhibaanada ka hor cadeeyay in uu tartanka ka haray
Madaxwaynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo xildhibaanada la hadlay ayaa caddeeyay in uu ka haray doorashada madaxtinimada.
Posted at 10:12 8 Feb
21 musharax oo isu soo haray
21 Murashax ayaa isugu soo haray loolanka doorashada madaxtinimada ka dib markii ay tanaasuleen saddex ka mid ah murashaxiinta, sida uu sheegay Afhayeenka baarlamaaanka Maxamed Cusmaan Jawaari.
Posted at 9:56 8 Feb
Magaca Ilaahay lacag ha ku gadaninina
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah guddoomiyaha Hay'adda Culumada Soomaaliyeed ayaa kalmad wacdi ah u jeedinaya xildhibaanada. Wuxuu ugu baaqay inay dalka u dooreen hoggaan fiican. Wuxuu xasuusiyay xildhibaanada dhaartii ay u dhaarteen inay umadda u shaqeyn doonaan, wuxuna ugu baaqay in dhaartii ay magaca eeba ku dhaarteen aysan ku gadanin lacag.
Posted at 9:50 8 Feb
Ololaha doorashada waxaa hareeyay eedaymo Musuqmaasuq
Intii lagu guda jiray ololaha musharixiinta waxaa soo baxayay warar sheegayay in codadka la kala iibsanayay. Halkan ka daawo warbixin uu Faarax lamaane ka diyaariyay doorashadan.
Posted at 9:48 8 Feb
Waddooyinka Muqdisho ayaa xiran
Weriyaha BBCda ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan wuxuu ku soo waramayaa in hadalhayntu u badan aysan ahayn gaadiidka istaagay ee ay tahay cidda masiirka umadda qaban doonta
Posted at 9:40 8 Feb
Kurastii way buuxsameen
Hoolka ayaa iminka buuxsamay, kuraasta fadhiga loogu tala galayna way buuxaan, welina dad ayaa soo galaya kuwaasoo inay istaagaan mooyee aan fadhi haysan.
Posted at 9:31 8 Feb
Lamaane oo ku sugan hoolka doorashada
Weriayayaal ka tirsan BBC-da oo uu ku jira Faarax Lamaane ayaa ku sugan hoolka ay ka dhaceysa doorasahada.
Posted at 9:28 8 Feb
8 xildhibaan ayaan wali imaanin
321 xildhibaan ayaa ilaa hadda saxiixday liiska is xaadirinta. 8 xildhibaan ayaa ka dhiman tirada guud ee labada gole oo ah 329
Posted at 9:23 8 Feb
Murashaxiinta qaar ayaan weli soo gaarin hoolka
Murashaxiinta qaar ayaan weli soo gaarin hoolka, waxaana socota nidaaminta iyo kala hufka goobta shirka. Ugu yaraan ilaa 4 bar koontarool ayaa adadka oo dhan lagu baarayey ayadoo aan la kala soocin. Waxaa dhici karta in qorshaha doorashada la bilaabo marka kooramku buuxsamo.
Posted at 9:21 8 Feb
Wali ma billaabanin doorashada
Weli waxaa socota imaatinka ka qayb galayaasha doorashada, kuwaasoo isugu jira xidhibaannada, saxafiyiinta iyo korjoogtada caalamiga ah.
Qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya
Guddiga qabanqabaada doorashada oo ka codsanaya xildhibaanada inay fariistaan